Hacking & Web Nche & Nyocha; Ihe Ndị Bara Uru Site na Ọcha
Mbanye anataghị ikike aghọwo nsogbu nkịtị na-eche ọtụtụ ndị na-ahụ maka ịntanetị taa. Maka ndị nweree-azụmahịa na ebe nrụọrụ weebụ, ịhapụ ndị hackers bụ otu n'ime ụzọ kasị mma iji hụ na nche na gị na saịtị. Otú ọ dị, anyị anaghị etinye ihe an'uche mgbe ị na-eme atụmatụ maka imewe weebụ anyị. Imirikiti azụmahịa e-azụmahịa na-eme ihe dị ukwuu na usoro mgbasa ozi n'ịntanetị ndị dị otú ahụ dị ka Nchọgharị NchọpụtaNjikarịcha (SEO) yana usoro ahia ahia. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ịgụnye ụfọdụ atụmatụ atụmatụ iji mepụta yanchebe megide ndị omempụ - componer en fotografia. Ụdị ihe ndị a nwere ike ime ka ndị ọbịa gị hụ nchebe mgbe ha na-eme nchọgharị na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Andrew Dyhan, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara ,kọwaa ụfọdụ ụzọ hacking na ụzọ isi dozie ha.
Enweghị ọnọdụ ọ bụla nke na-eweta atụmatụ enweghị atụ iji hụ na nkwụsi ike nke asaịtị. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ ihe ndị mmadụ nwere ike ime ma mee ka usoro ahụ dum dị mma. Ụfọdụ n'ime ụzọ ndị a gụnyere ihe ndị a:
Iji okwuntughe siri ike dị mkpa. Ị nwere ike igbochi onye hacker ịnweta ịnwetaebe nrụọrụ weebụ gị site na iji okwuntughe echedoro. Okwuntughe dịka 12345 na aha ụmụ nwere ike ịmepụta ụfọdụ n'ime atụmatụ ọrụ nke onye ọ bụlana ebum n'uche ọjọọ. N'ihi ya, ọ dị mkpa iji okwuntughe nke na-enweghị onye ọ bụla nwere ike ịkọ..Gbanwee okwuntughe ya mgbe nilenwere ike imekwu ihe nchedo na weebụsaịtị, ime ka nchedo ha buru ibu. N'elu ule ọzọ, onye nwere ike iji okwuntughe ozondị na-emepụta ihe iji mee ka nchekwa ha sie ike.
Ụfọdụ n'ime ụzọ ndị hacking na-emekarị chọrọ HTTPS dị mfe iji gbochie ha. Ederede HyperUsoro ntinye aka Secure na-enye aka igbochi mgbanwe nke ozi n'etiti sava weebụ na ihe nchọgharị. Usoro a na-enye nchekwa nchekwa pụrụ ichenke hacks na spoofs enweghị ike banye n'ime. Mkpọchi nkịtị nke ị nwere ike ịkwụsị iji HTTPS gụnyere Cross Site Scripts nakwa SQLinjections. Usoro ndị a na-eji ọnọdụ ntanetị yana koodu ntanetị mee ihe.
Spams na Phishing
Ndị Spammers bụ ndị a na-ezipụ ọtụtụ ozi na ozi ịntanetị na-enweghị atụndị agha. Ebumnuche nke ọtụtụ ọgụ ndị a na-adịghị edozi, na-ekpughe ọtụtụ ndị n'aka ndị nledo. Ọtụtụ internet aghụghọeme ya site n'enyemaka nke ndị spammers. Ị nwere ike gbanwee gaa na ihe nkesa email iji nweta ọtụtụ nchebe megide isi spam ozi ịntanetị. Na ndị ọzọikpe, ị ga-enwe ike igbochi agha nke ozi ndị a site na iji nzacha spam elu.
Ịntanetị nwere ndị mmadụ na-eme ụdị ihe niile. Ọ bụ ezi echiche ime dị iche ichemgbanwe mgbe ị na-emepụta ebe nrụọrụ weebụ gị. Ndị na-eme ihe ike na-eji nwayọọ nwayọọ eme ihe dị na koodu na saịtịonwe ya. Nchebe nke ebe nrụọrụ weebụ na nke ndị na-eji ya dabere na irè nke usoro mgbochi hacking ebe. DịkaN'ihi ya, ọ dị mkpa ka onye ọ bụla na-azụ ahịa chebe ọdịmma na nchekwa nke ịntanetị na ebe nrụọrụ weebụ ha. Nduzi a nwere ụfọdụusoro ndị dị mkpa nke nwere ike ime ka saịtị gị nweta ọtụtụ uru. Ị nwere ike ime mgbanwe ụfọdụ ma welie nchebe nkesaịtị gị budata.